သာရွေးချယ်ဖို့ခဲယဉ်းသည်5လွယ်ကူသောနေ့သင်နှင့်အတူရှယ်ယာမှမီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. Trips. အီတလီဖက်ရှင်မြို့တော်အဆိုပါသွားရောက်လည်ပတ်ခရီးသွားဧည့်များအတွက်ရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ resplendent ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ဖက်ရှင်နှင့်ပြည့်စုံသည်သာမက, သို့သော်တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သမိုင်းရှိပါတယ်, ဗိသုကာနှင့် လှပသောရှုခင်း to write home about.
မီလန်ကနေကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလွယ်ကူနေ့ခရီးစဉ်ရထားတတိယအီတလီနိုင်ငံမှနေ့အဘို့အကြီးဆုံးရေကန်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်၎င်း၏ရေပိုင်နက်အတွင်းပတ်လည်ဇိမ်ခံအပျော်စီးတွေ့ကြုံခံစား. အဆိုပါ stunning တွေ့ကြုံခံစားဖို့ဘာပိုကောင်းလမ်း အယ်လ်ပိုင်းရှုခင်း လှေ၏လေးသည်ထံမှ, အဖြစ်က၎င်း၏ကမ်းခြေပေါ်တွင်လှပသောရေနားဂုဏ်သတ္တိများမှာလြှို့ဝှကျထှကျသှား peek ယူဖို့အခွင့်အလမ်းရရှိ.
သငျသညျဆွစ်ဇာလန်ကွာအီတလီနိုင်ငံမြို့တော်ကနေပဲတစ်နေ့ခရီးစဉ်ကြောင်းကိုသင်ယူဖို့အံ့အားသင့်စေခြင်းငှါ. Tirano ထံမှ Bernina Express ကိုအပေါ် Hop နှင့်သင်ရုံနှစျခုနဲ့တစ်နှစ်ခွဲနာရီအတွင်းရှိလိမ့်မည်.
အဆိုပါခရီးကိုယ်နှိုက်ကရကျိုးနပ်သည်: ဒီကမ်ဘာပျေါတှငျ steepest ရထားလမ်းခရီးဖြစ်ပါသည်, ကနေတက် 429 ကျော်အထိမီတာ 1800 in the Swiss mountains. The stunning alpine scenery viewed from the train window will mean you will not want to leave the train.
သငျသညျစိန့်များ၏ဆွစ်ဇာလန်မြို့မှာတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်. Moritz, ဆွစ်ဇာလန်အကျော်ကြားဆုံးသောတောင်ပေါ်အပန်းဖြေစခန်း၏တဦးတည်း. This is where the rich and famous spend their holidays or ownachalet.
စိန့်. Moritz ၏ Canton ၏တောင်ဘက်စူးစမ်းလေ့လာမယ့်ပြီးပြည့်စုံသောအခြေခံစေသည် Graubunden. ဒါဟာဆွစ်ဇာလန်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှတစ်နေ့လျှင်ခရီးစဉ်များအတွက်ကောင်းတစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းမဟုတ်ပါဘူး, ကြောင်းလွန်းယူမယ်လို့အဖြစ် ခရီးသွားအချိန်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းများထဲမှ5နေ့မီလန်အားဖြင့်ရထားသော်လည်း မှစ. Trips! အပြင်မြို့အတွက်တွေကတော့ထံမှ, ဒီမှာအဓိကလှုပ်ရှားမှုများအိမ်ပြင်များမှာ. သငျသညျတောင်တက်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ် ဆောငျးရာသီအားကစား, သင်ဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဒေသတွင်ရက်သတ္တပတ်အဘို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားနိုင်ပါတယ်.
မြို့ထိပ်မှအောက်ခြေကနေကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာစီး, နှင့် Bergamos သိသိသာသာအထိမ်းအမှတကြည့်ယူ, ထိုကဲ့သို့သောစိန့်အဖြစ်. မာရီယာ Maggiore ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် Colleoni Chapel.
နောက်ဆုံး, ဒါပေမယ့်မရအနည်းဆုံး, Bergamo မယုံနိုင်စရာဝန်းရံတန်ဖိုးထားဖို့ခဏယူမမေ့မလြော့ပါ, တောင်ကုန်းမိုင်ဆန့်နှင့်အတူ, နှိမ့်ချဝေးကွာသောရေကန် Como ဖို့အားလုံးကိုလမ်း.
အဆိုပါ Franciacorta ဒေသအချို့အံ့မခန်းကမ်းလှမ်း, နမူနာဖို့သင်တို့အဘို့အဝိုင်အနိုင်ရဆု, ကြက်သရေအီတလီရှုခင်းအကြားမှာရှိတဲ့.
အဆိုပါ Franciacorta DOCG ဧရိယာနှင့်ပတ်သက်ပြီးပါဝင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် 3,000 ရုံတောင်ဘက်အီတလီနိုင်ငံ Lombardi ဒေသရှိ Lake Iseo အချို့ကိုအံ့ဩဘွယ်သောသာယာလှပလှိမ့ပိုင်နက်ဖုံးအုပ်စပျစ်နွယ်ပင်၏ဟက်တာ. ဤသည်မြောက်မြားစွာနဲ့အခြားနာမည်ကြီးအီတလီ၏တံထွေးထွေးခြင်းအကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်ပါသည် စပျစ်ရည်ဒေသများ, ထိုကဲ့သို့သောအနောက်ဘက် Piedmont နှင့် Conegliano Valdobbiadene အဖြစ် (စူပါပရီမီယံ Prosecco ၏နေအိမ်) to the east.
ဒီအချုပ်တည်နေရာ Franciacorta တစ်ဦးရင်ခုန်စရာထွက်ပြေးဖို့ဘို့ပြီးပြည့်စုံဦးတည်ရာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကောင်းစွာထိုက်တန်တဲ့စပျစ်ရည်ကိုခရီးစဉ်စေသည်, မီလန်ကနေဖွင့်ထားတဲ့နာရီခရီးစဉ်, it is accessible and beautiful in equal measure.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်း5မီလန်အားဖြင့်ရထား မှစ. နေ့ခရီးများထွက်ဗင်းနစ်အပါအဝင်မပါဘဲပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ! အဘယ်အရာကိုပိုကောင်းအီတလီနိုင်ငံတမီလန်ကနေအများဆုံးတန်ဖိုးကြီးရင်ခုန်စရာမြို့ကြီးများတစ်ရက်ခရီးစဉ်ကိုယူပြီးထက်ဖြစ်နိုင်, ဗင်းနစ်? ကဗင်းနစ်အပေါငျးတို့သရုံတနေ့သို့မွေ့လျော် fit ရန်ခက်ခဲသော်လည်း, သငျသညျဆက်ဆက်ကြိုးစားနိုင်.
၎င်း၏အေးလှည့်လည်, cobbled လမ်းများ. နာမည်ကျော် Piazza San Marco အတွက်ကော်ဖီဖူး. Perhaps even stretch to ridingagondola through the canals foratruly special experience.
သင်တို့သည်နောက်သံသယတော်ဟာတောက်ပဂွများကသဘောကျအောင်ဆက်ဆံပါလိမ့်မည်. အီတလီ၏တဦးတည်းရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သောစိတ်ကူးဗိသုကာခံစားကြည့်ပါ လူကြိုက်အများဆုံးမြို့ကြီးများ ခရီးသွားဧည့်များအတွက်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 လွယ်ကူသောနေ့ရထားဖြင့်မီလန် မှစ. Trips” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/day-trips-milan-train/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
Bergamo ခွေးရူး Daytrips ဥရောပသမဂ္ဂ မီလန် ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ travelvenice